Global Voices teny Malagasy » Lisitra nandaharana sarimihetsika maitso: Sarimihetsika fohy aziatika miresaka tontolo iainana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jona 2021 7:02 GMT 1	 · Mpanoratra EngageMedia Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Indonezia, Kambodza, Malezia, Myanmar (Birmania), Vietnam, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Teratany, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Voina, Zon'olombelona
Ity lisitra voalahatra ity dia avy amin'ny Cinemata , sehatra iray natao ho an'ireo sarimihetsika avy ao Azia-Pasifika miresaka momba ny sosialy sy ny tontolo iainana. Tetikasa iray an'ny EngageMedia , fikambanana iray tsy mikatsaka tombony ara-bola misahana ny media, teknolojia, ary kolontsaina. Nokiraina sy naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty amin'ny Global Voices.
Ao anatin'ny “Dagami Daytoy”, tantarain'i Noni Abao, Filipiàna mpamokatra sarimihetsika, ny fomba ataon'ny vondrompiarahamonin'ireo vazimba teratany ao Nueva Vizcaya, avaratr'i Filipina, hitolomany manohitra ireo faharavana efa am-polon-taona manjo ny tontolo iainana, amin'ny fitakiana ny hanakatonana  ny OceanaGold, iray amin'ireo goavan'ny famokarana volamena sy varahina eto amin'izao tontolo izao. Ity fanadihadiana ity no nahazo ny loka 2020 Gawad Cultural Center of the Philippines Para sa Alternatibong Pelikula at Video ary ny toerana faharoa tamin'ny 2020 Yale Environment 360 Video Contest. Rehefa vitan'i Abao ny fanodinana ny sarimihetsika, ampolony maro ireo mpikatroka izay nikarakara fibahanan-dàlana no nosamborina taorian'ny fifandonana tamin'ny pôlisy sy ireo solontenan'ilay orinasa.
Ity sarimihetsika fandresena lahatra ity dia nampiasaina hanaovana adisisika amin'ny governemanta foibe ao Myanmar mba hampitombo ny famatsiana rano any amin'ireo faritra tratry ny haintany ao Myanmar. Tamin'ny 2016 ilay sarimihetsika no novokarin'ireo mpandray anjara tamin'ilay atrikasa Picture People  natao tao Yangon, Myanmar, momba ny fitantaràna an-tsary ny fiovàna.
Ity ny tantaran'i Melikin. Tantaran'ireo vahoaka vazimba teratany marobe ao Sarawak izay namoy  ny tany nahaterahany ka lasan'ireo orinasa mpamokatra menaka voanio. Niaraka tamin'ny fanampian'ireo pôlitisiàna mpanao kolikoly, efa ho 10.000 hektara ny ala sy tany fambolena no voasoroka ary nasiana fefy, manakana ireo vahoaka teratany tsy ho afaka miditra amin'ny tanin'ny razamben-dry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/06/29/153064/